Thenga ama-Satchels | Isikole | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Induduzo ngenkathi ugqoke
I-satchel iyinhliziyo yezo zonke izikole zokuqala. Kungakhathaliseki ukuthi iluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka noma oluphuzi, elinamahloni noma ama-unicorns, into esemqoka ukuthi i-satchel enjengomntwana. Njengomzali, noma kunjalo, siyazi ukuthi ama-optics uma uthenga i-ranz ingxenye eyodwa kuphela yempi. Phela, i-satchel kumele isinde okungenani iminyaka yokuqala yokuqala yesikole samabanga aphansi.
Amehlo avulekile ukuthengwa kwe-satchel!
Akusho ukuthi thina bazali sinesidingo esikhulu kakhulu se-satchel yokuqala yezingane zethu.
Yini okufanele ubuke lapho uthenga i-satchel
Ngakho-ke, uma ingane yakho isivele ikhethile iphupho layo lephupho, kufanele uhlole le model ngokulandela indlela echazwe ngezansi. Ngaphezu kwalokho, akufanele uthenge i-satchel yengane yakho sekwephuzile kakhulu, ngoba amamodeli asheshayo athengiswa futhi ukukhungatheka kwengane yakho kuyafana kakhulu!
Yini ongayibheka lapho uthenga isitifiketi
Okubaluleke kakhulu kuqala kuqala uphawu lonke lokuvunywa. I-satchel kufanele ihambisane ne-NORM DIN 58124. Lokhu kuqinisekisa ukuthi i-satchel entsha ayinamanzi, ayasebenza futhi ephephile. Ungakwazi ukubona amasokisi ahlangabezana nalesi simiso, ilebuli ejwayelekile noma uphawu lwe-TÜV.
Futhi unake izibonisi nemibala ye-fluorescent. Ingane yakho ingadinga ukuqala ukusebenza ebusika uma isengakaboni. Imibala emnyama ngaphandle kokubukisa ibonakala ngabashayeli, ngakho-ke isikhwama kufanele sibe nalokhu kuvikelwa. Ama-reflectors aphonsa emuva ukukhanya kwezibani zezimoto futhi uqinisekise ukuthi ingane yakho ibonakala ngokucacile. Okubanzi nokukhudlwana kubonakaliso, kungcono, ikakhulukazi uma i-satchel ingabomvu okwesibhakabhaka noma i-orange.
Ikhasi lombala / izigcawu zekhasi lokubala
Yiqiniso, kubaluleke kakhulu ukuthi i-satchel ihlezi kahle, ikakhulukazi uma ingane yakho kufanele ihambe esikoleni isikhathi eside noma ibhasi. Ama-satchels ngokuvamile ayesinda kakhulu kulo mthethonqubo, ngakho-ke ukulingana okungalungile kungaholela ezinkingeni zakamuva futhi ngisho nokulimala. Ngakho-ke ama-risers kufanele abe okungenani amasentimitha amane ububanzi futhi aphakanyiswe kahle.
I-satchel efana ne-ergonomically emuva futhi ibaluleke kakhulu ekuthengeni kwe-satchel. Kumele kube ezingxenyeni eziningana zomzimba futhi ube kahle njengezintambo. I-satchel akufanele iqhubekele ngaphesheya kwengane.
Amathiphu wokuthenga kwe-Satchel
Kuhle kakhulu ukukwenza ukuhlolwa kugijimela esitolo nge-satchel esitokisini. Ngakho-ke ingane yakho ingaba ngcono kangcono ukuthi i-satchel egcwele izwa kanjani ngemuva.
Ama-Satchels anezikhala ezihlangothini kanye nesembozo esulula ukuvala
Uma i-satchel igcwalisa wonke amaphuzu angenhla, lokho kuyimfuneko ebalulekile. Uma i-satchel ekhethiwe isenamapokhethi ahlangothini, akukho lutho oluya endleleni yokuthenga.
Amapokhethi ahlangene aklanyelwe amabhodlela amanzi. Ngoba akuzona zonke amabhodlela ezinzima njengoba imiyalelo yokusetshenziswa isenza sikholwe. Ukuze ugweme izikhukhula ezincwadini nasezincwadini nasezincwadini ezihlala zomile futhi zihlanzekile, ibhodlela lamanzi akufanele lifakwe esitokisini ngokwaso, kodwa emaphaketheni angaphandle.
Okokugcina kodwa hhayi iphuzu elibalulekile yilo Ukuvalwa kwe-satchel, Ingane yakho kufanele ikwazi ukuyivula kalula futhi ngokushesha, ngisho nokuthi ingahlolwa ku esitolo. Okokugcina, kunesisusa esihle kuphela - ngenhlanhla akukho mithetho okumele ilandelwe!
Ama-satcheli wekhasi lokubala